Lucia - Dhiyabhorosi Bride | Apg29
The chokwadi pamusoro Lucia.
Lucia musande Catholic uyo kunamata vazhinji December. Pakati pezvimwe dzavo dzakasiyana Lucia chitima, zvose mumachechi uye mabhuku achinzi.
Nesafironi The katsi ainzi "Solbröd". "Safuroni Chingwa" rinobva "Lucia" uye rinoreva "Lucifer kuti mwenga." Lucifer izita dhiyabhorosi. Mune mamwe manzwi, zvinoreva kuti "Dhiyabhorosi Bride".
Funga nezvazvo apo vasikana vakura vakadzi vapfeke sezvo Lucia pamwe makenduru kwake bvudzi. Ndianiko kuti chaizvoizvo vapfeke sezvo? Uye ndiani ivo espouse?
Kana vanhu nziyo uye vazivise kuti Lucia uyo anounza chiedza saka vakatsiva naye naJesu. Raitwa naKristu kuti, panzvimbo Jesu.
Nokuti Jesu zvechokwadi kunounza Chiedza chechokwadi! Ndicho naye tichaburuka kurumbidza uye kunamata. Kwete "vasande" vakafa, vakanguva vafa kwemakore akawanda.
Tsika kupemberera Lucia riri kubva kuchihedheni.
The Catholic Church "wechiKristu" wechihedheni Lucia kupemberera pamwe kutanga kupemberera Saint Lucia. Asi kupemberera musande iri Chokwadi zvakafanana zvakaipa!
Lucia harina kupembererwa refu munzvimbo Nordic nharaunda
"Lucia" kana "Safuroni", iro rinoreva kuti "Chiedza," harina vachipemberera Sweden kana Nordic nyika kwenguva refu.
Yakanga iri 1700s kuti vakatanga kupembera Saint Lucia - asati akanga aisatombowanika zvachose.
Asi midwinter rave kupembererwa kwenguva refu, uye sezvo mumiririri dises kana munhukadzi vanamwari unodzivirira, akava "Lucias" mufananidzo kukudzwa uye vakakudza.
Izvi zvakaitika musi Midwinter Day musi 13 December.
Prokopios kuti "Lucia kupemberera"
Saka dhimoni Lussi ndiyo pfungwa kuti Lucia. Lucia iyo inowira regumi namatatu December akanga zvikuru kamwe nechokuita zita wadhiabhorosi Lucifer pane pamwe Catholic musande.
Kupemberera musi December 13 akura asi zita uye kusonganirana mutsvene Lucia ndiye ravakwa.
Lucia rinopembererwa muSicily. Vakagadza naye kuva rangano yakaita nhamba.
In Sisiri anotora Lucia anogamuchira zvokudya vana uye ruoko panze zvipo kwavari uye iye ane ndege mbongoro. Unogona munhu makwapa wake kukanda madota ayo pamusoro pechiso wacho.
zita nesafironi katsi raMwari hazvibvi kubva Saint Lucia asi kubva dhiabhorosi zita Lucifer.
Unozvidzinga kure "Safuroni" (Lucifer - Dhiyabhorosi), murume mavara pakati pemabhanzi tsvuku ne nesafironi.
kuvhiringidzika The Catholic Church kuti
Senguva dzose, yeKaturike Vaisanganisa nemashura, kutenda kwechiKristu, dhiabhorosi nemadhimoni pavanenge makazvisika vatsvene vavo.
Hatifaniri vatsvene kana madhimoni. Tinoda Jesu Kristu. Zviri chete Jesu ndiye chiedza uye anotipa chiedza kana tichitenda maari!
mutsvene Catholic - kunamata zvidhori
Vanonamata "vasande" vakafa asi havana kunzwisisa kuti vanamate uye vane mhosva zvifananidzo.
"Asi handina kunamata Lucia!" inoti unogona akashamiswa. Imwi vachiimba "Santa Lucia" pane imwe nguva?
The zita Lucia rinobva chete neshoko sezvo Lucifer - dhiabhorosi. nditende, dhiabhorosi vachadyara kwete chiedza.
Asi kana vanhu vapupure kuti Lucia uyo anounza chiedza saka vakatsiva naye naJesu. Rava chiratidzo antikristlig kuti iri panzvimbo Jesu.
Kusimudzira Jesu panzvimbo. Ndiye ichivhenekera kumusoro rima.
Isaya 9: 2.The vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru; kune avo mhenyu worufu nyika zvichapedza chiedza inonyatsooneka.
John 1: 9. Chiedza chechokwadi chinovhenekera munhu mumwe nomumwe unouya munyika.
Umwari uye vezvokutengeserana achinzi
Lucia rinopembererwa December 13 kuSweden uye dzimwe nyika. Lucia rinopembererwa vaviri mumachechi akasiyana, raunoshanda uye zvokutengeserana achinzi. Nokuti panyaya kupemberera wake rokunyika uye zvokutengeserana achinzi tinonzwisisa kuti hachisi Christian. Kudai nezvaJesu Kristu asina inosimbiswa muzvirevo dzakadaro. Lucia haana chokuita neBhaibheri kuita. Iye ane zvichangobva zvigadzirwa. The ngano pamusoro Lucia ndiyewo kwete zvebhaibheri, asi chaizvoizvo vechihedheni uye unyengeri.
Lucia musande Catholic akanga somusande makore 100 pashure pokufa kwake. Iye akaurayiwa muna Syracuse muna Sisiri muna 304. Akanga mhosva yokuva muKristu, uye izvi kwainzi kuva kupandukira mambo weRoma.
Pane ngano dzakawanda pamusoro Lucia uye zvakaoma kuchengeta akavasarudza. Chimwe ndechokuti iye akaenda zvokudya muRoma pevhu catacombs apo vaKristu vakanga vakavanda. Kuti tione apo akaenda murima tunnels, iye akaisa makenduru pamusoro wake. Pane une tsika sei vasikana vaduku vane chandelier kana vanofunga Lucia.
Ari kazhinji vanoratidzwa nameso ake akapfeka mudhiramu. Pane ngano kuti iye akabvarura meso ake kune muchinda yechihedheni vasingagoni kumuroora. Zvino hwakabuda ziso idzva uye nani kwaari.
Munguva Catholic nyika, iye maziso aidzivirira uye Ophthalmologicals naro wake zita. Lucia ndiyewo musande aive Syracuse.
Light riri bvudzi
On December 13, ipapo kazhinji Lucia vachiuya chiedza vhudzi, asi hazvisi iye anounza chiedza, ndiJesu. Uye anouya kwete chiedza - ndiye Chiedza. Zvakakosha kuti hatidi zvinhu abvise anopenya Jesu.
The zita Lucia rinobva lux, zvinoreva chiedza. Ona kufanana ne Lucifer, uyo ari zita wadhiyabhorosi!
Vimbiso kwete kuroorwa
Chimwe ngano ndechokuti Lucia zvavimbiswa naMwari asina kuroora. Apo murume wechiduku vasingagoni kumuwana, akaratidza achimugadzirira Kesari muRoma kuti aiva muKristu.
Akanga atongerwa kumanikidzwa basa iri yepfambi. Pavakasvika kundotora naye, havana kukanganisa kwake. Ipapo vakaedza nekuipisa padanda, asi kana pazvisina musoro ivo naye. The tsvuku bhendi akapoteredza Lucia kuti muchiuno chiratidzo ropa rake yaiyerera.
Munguva Nordic nharaunda, tiri zvikuru woga kupemberera Lucia panguva yedu ndichibvunza nzira. Asi pane tsika mune dzimwe nzvimbo Italy. Zvipo anoparadzirwa vana Verona pamusoro Lucia Day pakuyeuka Lucia akavadzivirira kubva 1300s denda!
Muguta Syracuse akapfeka izvozvo kwevhiki mudungwe chifananidzo unomiririra Lucia mashoma zana kilos. Uyewo muguta Amaroni muna kuCalabria ivo mutambo Lucia ari mumudungwe, asi boka imwe anorichengeta muguta musande, Santa Barbara.
Zvingaita sokuti kupemberera Lucia saka inotaura kutenda kwechiKristu, asi hazvisi zvechokwadi zvakadaro. Zviri nani kutaura Jesu ari Chiedza chechokwadi chainge chichizouya munyika uye anopa chiedza kuvanhu vose! (Johani 1: 9)
Vane zvinhu vavekuda meso ako kubva Jesu kuitira kuti murege kuponeswa. The Catholic mutsvene mumwe akadaro.
Zvakakosha kuti iwe urege chinhu kutora maziso ako kure Jesu. NdiJesu chete oga ndiye Ishe uye Muponesi!